Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Waxaad xaq u leedahay in aad caafimaad qabto markaad iskoolka joogto
Maalintaada inta badan waxaad ku reebtaa waqtigaaga iskoolka waana muhiim in aad ku faraxsantahay iskoolka. Haddii aad xittaa markaa xanuunsantahay oo aad dareemayso culeys iyo welwel waxaad u tagi kartaa qaybta caafimaadka ee ardayda ama qof kale oo weyn oo iskoolka ka tirsan.
Culeys iyo welwel – sidee dareemeysaa markaa?
Waxaa isticmaaleynaa ereyo badan oo aan ku sherxeyno culeys iyo welwel, laakiin aasaaska waxa ay ka hadlayaan in qofku caafimaadkiisa uu taam aheyn. Tusaale ahaan waxey ahan kartaa welwel kaa haya cashirrada, imtixaan iyo shahaadada, iyo in aanad ogeyn maadada sida aad ku tahay ama in aad dareemeyso in ay shaqada kugu badantahay. Dareen aan fiicneyn iyo welwel ayaa dareemi kartaa marka aad joogto iskoolka ama guriga subaxdii iyo habeenki. Laga yaaba in ay caloosha ku xanuuneyso, madaxa ku xanuunayo ama in ay kugu adagtahay in aad is debciyo adiga oo xataa guriga jooga oo fasax ah.
Caawinaaddee heli kartaa?
Hadii aad dareemeyso in aad cashirro badan heysato iyo intaan halmar, waxaad la hadli kartaa macalinkaaga ama maamulaha. Iskoolka ayaa go'aanka cashirada iyo imtaxaanka iskaleh, laakiin waxaad adiga xataa xaq u leedahay in aad saameeyso iskooldhigashadaada. Waxaad weliba xaq u leedahay in aad ugaato maado walba meesha aad ka joogto. Hadii aad dib u dhacdo waxaad xaq u leedahay in aad hesho caawinaad. Wixii dheeraad ah ka aqriso halkan:
Iskoolaadka oo dhan waxaa qasab ku ah in ay ardayda ku casumaan caafimaad baarid. Waa in aad lahadi kartaa dhakhtarka iskoolka, kalkaalisada, dhaqtarka cilmo nafsiga, lataliye ama qof kale oo khibrab leh hadii aad u baahato. Waxay kaa caawinayaan in aad caafimaado.
In aad ogtahay sida uu caafimaadkaagu yahay
Adiga kaliya ayaa og in aad dareemeyso culeys iyo welwel. Mararka qaar waxaad la xanuunsan kartaa waxyaabo aanan iskoolka ama cashirada qusaynin. Markaa xataa waxaa ku caawin kara iskoolka.